Maxey ku kala duwan yihiin Android iyo iOS?? – Fatuux Tech
Maxey ku kala duwan yihiin Android iyo iOS??
Fatuux Cade	Uncategorized	 February 26, 2019 1 Minute
Haddaan ku hormarno Android ka, waa system kawada dhaxeeya shirkaddaha taleefanada soo saartay. Waxaana lahaatay shirkadda weyn ee Google ayadaana hadda hormariso.
Android ka waxuu ku shaqeeyaa inta taleefan kasoo hartay iPhone ka. Waana system ruux kasta hormarin karo fikradna ku darsan karo. asal ahaan system kaan ayaa loo soo galiyay internet ka si tijaaba ah, shirkaddaha soo saara taleefanada ayaa u bogay nadaam ka uu u shaqeeyo. nooca manta u danbeeyo ayaa ah Android 9 Pie. Waxuuna sii caawinayaa ku shaqeynta network ga 5G.
Haddaan u imaano iOS waa system ay sameysay, hormarisay shirkadda weyn ee Apple. iOS ayaa noqonaya system ka no1 u heesta dunida markii loo fiiriyo tayo ahaan iyo sumcad ahaanba.
iOS ma aha mid ay isticmaalaan shirkaddaha kale ee kaliya waxaa isticmaala taleefanka iPhone ka sidoo kale iPad, iPod ka iyo wixii qalab ay soo saarto shirkadda Apple. iOS ma aha sidoo kale mid free ah ee waxey qaas u tahay un Apple. nooca u danbeeyo ayaa ah 12.1.4.
Intaas kaliya waxey aheyd warbixin guud. Waad ku mahadsan tahay wlaal aqris kaaga. wixii fikrad ah ama talo ah comment ga iigu soo qor sida ugu dhaqsiyaha badan insha Allah waan kaaga soo jawaabi doonaa.
Previous Post Waa maxay Internet of Things(IoT)!!
Next Post Waa maxay Cloud Computing..